Donald Trump oo xilka madaxweyne ku xigeenka Mareykanka la rabay gabadhiisa Ivanka – Calanka.com
Donald Trump oo xilka madaxweyne ku xigeenka Mareykanka la rabay gabadhiisa Ivanka
Shida uu ku shaaciyay buug cusub oo uu qoray Richard Gates oo ahaa mid ka mid ah la-taliyeyaashiisii ololaha doorashada sannadka 2016 ayaa waxaa uu madaxweyne Donald Trump dhowr jeer soo jeediyay in gabadha uu dhalay ee Ivanka uu ka dhigto madaxweyne ku xigeen.
Qoraaga ayaa sheegay in soo jeedinta Trump ay fajac ku noqotay guud ahaan dadkii shirka ku jiray oo ay ku jirtay Ivanka qudheeda.
Buugan oo uu qoraaga u bixiyay «Wicked Game: An Insider’s Story on How Trump Won, Mueller Failed and America Lost» ayuu madaxweyne Trump ku yiri ” Waxaan door-bidayaa Ivanka. Sidey idinka thay Ivanka oo madaxweyne ku xigeen ii noqota?”.
Markii uu hadalkan soo jeediyay Trump ayuu qoraagu sheegay in giddi wixii shirka fadhiyay ay u wada jeesteen Ivanka, iasgoo Trumo hadalkiisa raaciyay in ay u qalanto jagada sababo la xiriira in ay tahay qof quruxsan, caqli bada ayna dadku wada jeclaan doonaan.
Trump ayaa warkan ku sheegay mid been abuur ah, waxaana baahiyay warbaahin waaweyn sida CNN iyo kuwo la mid ah.
Ivanka ayaa iminka ah mid la mid ah lataliyayaasha madaxweye Trump, waxaana ag gacanta ku haysaa ganacsiga aabeheed.
Ugu dambeyn waxaa xilkaasi loo magacaabay ninka iminka haya ee lagu magacaabo Mike Pence.